Sharciyada haramaha ee Illinois - isticmaalka shakhsiyadeed ee xashiishadda iyo sharciyeynta Illinois 'CRTA
Ma dooneysaa inaad gasho warshadaha xashiishadda sharciyeed?
Muxuu sharciga cusub ka leeyahay isticmaalka xashiishadda shaqsiyeed ee Illinois?
Sharci cusub oo sharci u siinaya isticmaalka marijuana madadaalo waxaa laga meel mariyay Illinois Maajo 31, 2019. Dawladdu waa tan 11aad ee dalka u oggolaata isticmaalka marijuanaad madadaalo, laakiin gobolka ugu horreeya ee sharci ka dhigaya xashiishadda iyadoo la raacayo nidaamka sharci dejinta.
Sida uu qabo sharcigaan xashiishadda cusub, “Golaha guud wuxuu ogaadey oo cadeynayaa in isticmaalka xashiishadda ay sharci u tahay dadka jira 21 sano ama ka weyn.”
Sharci dejinta Illinois
Hoos waxaan ka wada hadlaynaa kuwa cusub Sharciyada Cawska ee Illinois taasi waxay hadda dhaqan galeysaa laga bilaabo Janaayo 1, 2020, iyo wixii ka dambeeya. Xusuusnow in sharciyada cannbis ay si dhakhso leh isu beddelaan, sidaa darteed marwalba dib uga fiirso sharciyada cannabis ee hadda ka jira Illinois.
Kumaa loo ogolyahay in lagu iibiyo Marijuana?
Bilowga, kaliya kaliyeyaal shati shati u leh ayaa loo oggol yahay inay iibiyaan xashiishadda caafimaad marka qaanuunka uu sharci noqdo Janaayo 2020. Ruqsado badan ayaa la siin doonaa dukaannada kale badhtamaha sanadka.
Horeyba, waxaa jira tiro badan oo wariyayaal ah qaybo kala duwan oo gobolka ah. Bilowga 2020, waxaa la saadaalinayaa in ku dhow 300 dukaanno ay iibin doonaan marijuana.
Si kastaba ha noqotee, wali waxay ku xiran tahay dowladda hoose iyo maamulka gobolka inay go'aan ka gaaraan in iibiyayaasha xashiishadda ay ka shaqeyn karaan aagagga ay ka jiraan soojireenka.
Halkee looga Sigaar Sigaar?
Sida ku xusan sharciga cusub, sigaar cabista cannabis waxaa loo oggol yahay guriga iyo gudaha xerayaasha iibiya marijuana. Sikastaba, sigaar cabista waa ka mamnuuc qaybaha soo socda:
Meelaha dadweynaha, sida wadooyinka iyo jardiinooyinka
Gawaarida gawaarida ha ahaato mid shaqsiyadeed ama mid kale
Xafiisyada booliiska ee u dhaw, ama u dhow darawalada basaska dugsiga ee wali ku jira shaqada
Gudaha iskuulka dhexdiisa. Si kastaba ha noqotee, ka dhaafitaan ayaa loo sameeyaa kiiska daaweynta marijuana
U dhaw qof kasta oo ka yar da'da 21
Iyada oo la oggol yahay in lagu cabo maandooriyaha xirmooyinka gurigaaga, milkiilayaasha guryaha waxay xaq u leeyihiin inay mamnuuc ka sameeyaan isla dhismaha gudihiisa. Kulliyadaha iyo jaamacadaha sidoo kale waa loo ogolaan doonaa inay mamnuucaan sigaar-cabbista wejiga ka dhex jirta gudaha xarumaha.
Tirada haramaha mid lahaan kartaa
Sida sharcigu qabo, dadka deggan Illinois ayaa loo oggolaan doonaa inay lahaadaan 30 garaam oo ubax cannabis ah, 5 garaam oo xashiishadda cannabis ah, iyo 500 milligram oo ah xashiishadda cannabis. Wax soo saarka cannabis waxaa ku jira tinctures iyo waxyaabaha la cuni karo.
Canshuuraha iibka ayaa lagu dabaqi doonaa dhammaan waxyaabaha marijuana. Tusaale ahaan, alaabooyinka ay THC ka yar tahay 35% waxay lahaan doonaan canshuur iib ah 10%. Saliidaha iyo wixii dawooyin ah ee loo isticmaalo cannabis waxaa lagu canshuurayaa 20%. Badeecada leh uruurinta THC ee ka badan 35% waxay lahaan doonaan canshuurta iibka oo qiyaastii ah 25%.
Marka laga reebo canshuurta iibka, 7% canshuurta guud waxaa lagu soo rogi doonaa marijuana ay iibin doonaan kuwa wax iibiya kuwa ka ganacsada. Waxay u egtahay in, dhamaadka maalinta, qarashkan loo gudbin doono macaamiisha.
Halkee Marijuana-ga iibintu ka iman doonaa?
Waqtigaan la joogo, Illinois waxaa ku yaal 20 xarumood oo lagu nafaqeeyo marijuana. Bilowga Janaayo 2020, kuwani waxay noqon doonaan tas-hiilaadka kaliya ee loo ogolaan doono inay koraan marijuana. Sanadka gudihiis, dadka wax soo iibsada ee xiisaynaya marijuana ayaa loo ogolaan doonaa inay gudbiyaan codsiyadooda liisanka. Ruqsad ayaa la siin doonaa xarumaha kori kara ilaa 5000 cagood oo laba jibbaaran oo haramaha ah.
Mid Ma Kartaa Marijuana?
Beerista xashiishka waxay sharci u noqon doontaa kuwa u qaata marijuana ujeedooyin caafimaad. Bukaannadaan waxaa loo oggol yahay inay koraan 5 dhirta marijuana wakhti kasta oo loo helo. Dhanka kale, dadka isticmaala marijuana madadaalo looma ogolaan doono inay gurigooda ku beeraan marijuana. Markaad sidaa sameyso waxay soo jiidan doontaa ganaax lacageed oo dhan $ 200.
Ayaa Loo Oggol Yahay Inuu Koro Daroogada Cannabis ee Illinois
Haddii aad ka diiwaangashantahay isticmaalka naxariis ee barnaamijka xashiishadda caafimaadka, oo aad ku jirto da'da xadka sharcigu dejiyey, waad awoodaan inaad kobacdo marijuana. Waxaad sidoo kale u baahan tahay inaad tahay degane gobolkan si laguu oggolaado inaad haramaha guriga ku korayso. Sida uu qabo sharcigaan, degane waa "Qofka ku nool gobolka 30 maalmood."
Hadaad koraan marijuana, waa inaad u ekaataa dhirta. Waad yeelan kartaa wakiil kuu sameeya tan muddo gaaban markaad maqantahay. Taasi waxay tidhi, dhirtu waa inaysan marin ama isticmaalin dad kale oo aan fasax u haysan.
Sida loo Koro Cannabis Guriga
Sida sharcigu qabo, dhirta marijuanaada waa in lagu beero meel xiran oo xiran. Tani waxay xaqiijineysaa in dhirtu aysan geli karin dadka aan fasaxa haysan. Waxay noqon doontaa sharci darro in lagu beero dhir meel dadweynuhu si fudud u geli karaan.
Intaa waxaa sii dheer, qof kasta oo u diiwaangashan inuu beero xashiishadda cannabis ayaa laga mamnuucay inuu siiyo dhir ama shey kasta oo cannabis ku keenta jaarka, asxaabta, ama qof kasta oo arrinka khuseeya. Sameynta tani kaliya ma soo jiidanayso rigoore, laakiin waxay sidoo kale horseedi doontaa kala noqosho guriga xaq u koraya.
Xagee Looga Helaa Biraha Marijuana?
Abuurka marijuana waxaa lagu bixin doonaa miinooyin kala duwan oo shati u leh inay iibiyaan waxyaabaha marijuana. Waa sharci darro inaad iibsato abuurka qof kale. Kaliya kuwa ka diiwaan gashan isticmaalka naxariis ayaa loo oggolaan doonaa inay iibsadaan abuurka oo ay ku beeri karaan dhirta xashiishadda bilaa liisanka.
Isticmaalka Xashiishka iyo Haysashada Dadka Kayar da'da 21
Sida ku xusan sharciga cusub, haysashada xashiishadda qof kasta oo da'diisu ka yar tahay 21 sano ayaa noqon doonta fal-dambiyeed. Ciqaabta dambiyada noocaas ah waxay kuxiran tahay duruufaha jira, waxaana ku jiri kara:
Ka noqoshada liisanka wadista haddii qofku uu wado gaari waqtiga uu galay danbiga
Ganaax aan ka yarayn $ 500 haddii waalid ama ilaaliye u oggolaado qof kasta oo kayar da'da inuu isticmaalo marijuana
Muddada xabsi ku haynta haddii ay jiraan dambiyo kale oo la galay intii uu salka ku hayey marijuana
In kasta oo lagaa doonayo in aad soo saarto dukumentiyo aqoonsi si aad u xaqiijiso da'daada marka aad iibsanayso waxyaabaha marijuana ah, macluumaadkaaga shaqsiyeed waa la ilaalin doonaa ujeeddooyin asturnaan awgeed. Iibiyaasha looma baahanayo inay diiwaan geliyaan macluumaadkaaga shakhsiyeed. Haddii ay sidaa yeelaan, waxay u baahan doonaan marka hore oggolaanshahaaga.
Mar haddii sharcigan uu noqdo sharci, kuwa raba inay marijuana u qaataan madadaalo ama ujeedooyin caafimaad waxay heli doonaan waqti sahlan oo ay ku helaan alaabada marijuana ee ay u baahan yihiin. Waxay sidoo kale ka heli doonaan qiimo lacagtooda maxaa yeelay dhammaan macaamil ganacsi ayaa loo sameyn doonaa si sharciga waafaqsan.
Si kastaba ha noqotee, kuwa ka yar da'da 21 waa inay ka fogaadaan isticmaalka ama haysashada marijuana iyo wax kasta oo ka mid ah alaabada la xiriirta sababtoo ah tani waxay ku kicin kartaa dhibaato saraakiisha sharci fulinta.